यसपालिको दशैंमा नयाँ नोट साट्न नपाइने ! – Namaste Dainik
यसपालिको दशैंमा नयाँ नोट साट्न नपाइने !
August 31, 2020 August 31, 2020 NamastedainikLeaveaComment on यसपालिको दशैंमा नयाँ नोट साट्न नपाइने !
काठमाडौं । हिन्दुहरुको महानचाड दशैंको विषेशता राम्रो लगाउने र मिठो खान, ठुलाबडासँग आशिर्वादसँगै दक्षिणामा नयाँ नोट प्रमुख हुन्छ ।राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्षको दशैं लक्षित गरेर ५, १०, २०, ५० र १०० दरका नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको थियो । तर यो वर्षको यसपालीको दशैंमा नयाँ नोट नपाइने भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनहुँ बढिरहेको हुँदा अघिल्ला वर्षहरुमा झैं राष्ट्र बैंकले दशैंको लागि नयाँ नोट नि’ष्काशन नगर्ने भएको हो । यसअघिका दशैंमा राष्ट्र बैंकले प्रतिव्यक्ति तथा संस्था तोकेर दशैंलाई लक्षित गरी नयाँ नोट वितरण गर्ने गरेको थियो ।
तर यसपाली भने बढ्दो कोरोना भाइसरको संक्रमणका कारण भिडभाड हुने जस्ता कुनै पनि कार्य नगर्ने सरकारको निर्देशन छ । सो निर्देशनलाई पालना गर्दै दशै लक्षित नयाँ नोट वितरण नगर्ने राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारीले बताए ।‘पहिले जस्तो समय तोकेर वा बैंक निर्धारण गरेर दशैंमा नयाँ नोट वितरण यो वर्ष हुँदैन’ ती अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा थप छलफल अझै भइरहको छ, असोजको पहिलो सातासम्म आधिकारीक निर्णय गरी सूचना जारी हुन्छ ।’राष्ट्र बैंकले गत वर्षबाट दशैं बाहेक पनि नयाँ नोट आवश्यक पर्नेलाई बैंकमार्फत् वितरण गरिरहेको छ ।
दशैंमा नोट आवश्यक पर्नेले अहिलेबाटै सम्बन्धित बैंकबाट सुरक्षित तबरले लिनसक्ने उनले जानकारी दिए । गत वर्षको दशैंमा मात्र राष्ट्र बैंकले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ नयाँ नोट वितरण गरेको थियो । हाल ५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ नोट सर्कुलरमा रहेका छन् ।
रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरु केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिने तयारीमा
नेपालमा कोरोना भाइरस बाट पहिलो पटक स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु !
ग्यास उद्योगमा शव फेला ।
April 6, 2020 Namastedainik
घर बिहिन बालबालिका भेटिएमा १०४ मा सम्पर्क गरिदिन राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् को आग्रह ।